Posts Tagged: Apple	RIP Steve Jobs
Apple’s New Magic Trackpad, Battery Charger and MacPro
On July 30, 2010	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Apple, Mac	ဒီအပတ်မှာ Apple က iMac line ကို hardware မြင့်တာတွေနဲ့ update လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းကတော့ ဘာမှမပြောင်းဘူး အထဲက Spec ပြောင်းကုန်တာ။ အရင် ၀ယ်ထားတဲ့သူတွေ ကြေကွဲချိန်ရောက်ပြီ။ Processors Core i series တွေဖြစ်လာသလို Graphic လဲမြင့်သွားပါတယ်။ နောက် SD Card slot က နောက်ဆုံးပေါ် DSLR camera တွေမှာ သုံးနေပြီဖြစ်တဲ့ SDXC Card ကို support စလုပ်ပါပြီ အရင်က SDHC အထိပဲရတာပါ။
Apple, Mac	Continue Reading
Repairing MacBook Pro Fan
On July 2, 2010	by Htoo Tay Zar	With	4 Comments	- Apple, Mac	ဒီနေ့ မနက်စောစောမှာ ကျောက်မြောင်းမှာ ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ ကွန်ပျူတာ အခွေဆိုင်သွားဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ ကြုံနေတာနဲ့ ဒီကောင့်ဆီက tools တွေနဲ့ပဲ ပါလာတဲ့ ကျွန်တော့် MacBook Pro ကို ဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်စက်မှာ fan ပျက်နေတာ ၃ လလောက်ရှိနေပြီ မလည်တော့ဘူး.. Dashboard က iStatPro မှာလဲ မပြတော့ဘူး။ စလုံးမှာတုန်းကလဲ စက်မအားလို့ မပြင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ဒီပြန်ရောက်တော့လဲ မထူးဘူးဆိုပြီး ဖွင့်လိုက်တာပါ။
On June 29, 2010	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Apple, Mac	Apple Remote က presentation လုပ်ဖို့လိုမျိုးတွေမှာ တော်တော်အသုံးဝင်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဈေးကြီးတာကတော့ ချွင်းချက်ပေါ့။ အမှန်တော့ မိတ်ဆွေမှာ iPhone, iPod touch, iPad တစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် သူတို့ကိုလဲ remote အနေနဲ့ Apple ကလုပ်ပေးထားတဲ့ Remote free app သုံးလို့ရသလို 1$ ပေးပြီး Keynote Remote လဲဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် Sony Ericsson, Nokia လိုဖုန်း bluetooth သုံးပြီး pair လုပ်ပြီး remote အနေနဲ့ သုံးလို့ရပါတယ်။ Apple, Mac	Continue Reading
On June 22, 2010	by Htoo Tay Zar	With	7 Comments	- Apple, iPhone	iPhone 4th generation အသစ်ကို Apple က WWDC 2010 မှာ စပြီးတရားဝင်ပြောပါပြီ။ နာမည်ကို iPhone4လိုခေါ်ပါတယ်.. အစက အများကမှန်းကြတာ iPhone 4G, iPhone HD လို့ခေါ်မယ်မှန်းထားကြတာ။ Apple, iPhone	Continue Reading
WWDC 10 is coming!!
On April 28, 2010	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Apple	World Wide Developer Conference 2010 ကို ဒီနှစ် June7ကနေ 11 ရက်အထိ ၅ ရက်လုပ်သွားမယ်လို့ Apple က တရားဝင်ကြေငြာပါပြီ။ ဒီနှစ် အတွက် tag line က The center of the app univers လို့ဆိုပါတယ်။ ဟုတ်တာပေါ့ ဒီနှစ် iPhone 4G အကြောင်း OS 4.0 အကြောင်းက အရေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ်က မနှစ်က 2009 WWDC ကလို OS X အသစ်ထုတ်ဖို့မှမရှိတာပဲ။ Apple, iPhone	Continue Reading
Apple iAd iCons Download!!
Apple, Design, Icon	Older Entries	Recent Posts